ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ | Page 12 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
2016 ခုနှစ်5လတာအတွင်း အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေအရ အရေးယူမှု 29 မှု ရှိနေ
9.6.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
အများပြည်သူကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက် ဆေးဝါးများဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားသောဆေးဆိုင် များတွင် ပြည်တွင်း၌မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆေးဝ...
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 34
6.6.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
1.6.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 34 တွင်
1. သကြားဘယ်လို လျှော့စားကြမလဲ (Page – 5)
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 33
25.5.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 33 တွင်
1. လိမ္မော်သီးစားရင် ပျော့ဖတ်ကိုပါစားပါ (Page – 15)
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 32
18.5.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 32 တွင်
1. ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတွင် အဓိကပါဝင်နေသည့် နိုင်ငံများ (Page –...
2. ကမ္ဘာ့လေထု (...
လူကုန်ကူးခံရပြီး နေရပ်သို့ပြန်လာသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
4.6.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
ဖုန်းမျိုချခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆရာဝန်ကခွဲစိတ်ပြီး ဖယ်ရှားပေးခဲ့ရ
3.6.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
31.5.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေမှုတွေကို မီးမောင်း ထိုးပြနိုင်ရန်၊ ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုလျှော့ချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး နှစ်စဉ်နှ...